Ho An’ireo Mpampahalala Vaovao, Torohevitra Voavao Momba Ny Fandrakofana Resaka Famonoantena Avy Amin’ny Rosiana Mpanivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2016 3:46 GMT
Nolazain'ny mpitondra tenin'ilay masoivoho tamin'ireo mpanangona vaovao fa azo inoana hiseho masoandro amin'ny faran'ny May ilay torolàlana vaovao, araka ny tatitra iray avy amin'ny masoivohom-baovao Interfax. “Vinavinainay havoaka amin'ny faran'ny lohataona ireo torolàlana,” hoy, hono, ny navalin'i Ampelonsky. “Tsy mbola fantatro aloha hatreto hoe rahoviana no hifarana ny asa, nefa heveriko fa rehefa mifarana ny lohataona dia efa hanana zavatra hatolotra ny vahoaka izahay.”
Amin'izao fotoana izao dia fehezin'ny lalàna ao Rosia ny fandrakofana raharaha mahakasika famonoantena eny anaty media na ny votoaty ety anaty aterineto “Ho Fiarovana Ny Ankizy Amin'ny Vaovao Mety Hanohintohina ny Fahasalamany Sy Ny Fivoarany.” Faritan'ny lalàna ho zavatra “manohintohina” izay “mety hiteraka tahotra, horohoro, na saritaka amin'ny ankizy”, na mampiseho herisetra, hetsika tsy araka ny lalàna, fampiasàna tafahoatra zavatra voaràra, fampijaliantena, tafiditra amin'izany ny firesahana famonoantena. Ny Sampandraharaha Federaly Ho Fanarahamaso ny Zon'ny Mpanjifa sy ny Fahasambaran'ny Olona no nomena andraikitra hikaroka ireo fandikàn-dalàna ary afaka manivana ireo vaovao miaty “fampielezankevitra momba ny famonoantena” na raha tsy izany dia zavatra manohintohina ny ankizy, amin'ny fanolorana azy ho apetraka ao anatin'ny lisitra maintin'ny Aterineto Rosiana.
Araka ny mpitondra tenin'ny Roscomnadzor, efa nanao lanonana fanokafana ny asany hametrahana ireo andiana torolàlana ireo ilay vondrona, izay nahitàna ny mpanao gazety, solontenan'ireo vondrona ara-pinoana, hatramin'ny manampahaizana avy amin'ny Roscomnadzor sy ny Sampandraharaha Federaly Ho Fanarahamaso ny Zon'ny Mpanjifa sy ny Fahasambaran'ny Olona. Voalaza fa nataon'ilay vondron'asa ho fototry ny torohevitra avy aminy ho an'ireo Rosiana mpampahalala vaovao mitatitra momba ny resaka famonoantena ireo “torolàlana avy amin'ny Fikambanana Manerantany misahana ny Fahasalamana” (toa manondro indrindra indrindra io taridàlana io ho an'ireo matianina amin'ny resaka fampahalalana vaovao), saingy nomarihan'i Ampelonsky fa ireo andianà manampahaizana manokana dia niasa koa taminà “antontan-taratasy hafa izay mety ho mifandray amin'ireo fitakiana ” ao anatin'ny lalàna Rosiana.
Na tsy mazava tsara aza izay tena ho voarakitr'ireo femeperana ireo, dia toa manampy faneriterena misimisy kokoa amin'ireo fehezana fameperana tsy mitsahatra mitombo itantanana ny azo avoakan'ireo fampahalalambaovao ho an'ny daholobe sy ny sehatra ety anaty aterineto ilay izy. Ohatra iray azo atolotra ny tranga iray momba ny fifampiresahana misy amin'izao fotoana mikasika ny fitarainan'ireo mararin'ny homamiadana ao Rosia, izay efa fiainana mahazatra azy ny tsy fahampian'ny fanafody tokony homen'ny fanjakana azy ireo. Matetika ireo tantara momba ireo Rosiana izay efa lasa lavitra ny aretina homamiadana manjo azy ka misafidy ny hamono tena no indrisy mipoitra tsy tapaka eny anaty pejin'ireo famohana vaovao Rosiana: fanadihadiana ifotony iray no nahitàna fa tao Maosko tamin'ny Febroary 2015 fotsiny, 11 ireo mararin'ny homamiadana no maty namono tena.
Tsy eken'ny rafitry ny lalàna Rosiana ny famonoantena ambany fanarahamaso, ary raràny ny fanaovana “euthanasia”: ao amin'ny fepetra ao Rosia momba ny heloka bevava, ny euthanasia dia raisina ho toy ny famonoana olona efa nomanina mialoha.
Mandritra izany fotoana izany, nanao raharahan'ny polisy nijery ireo fandrakofana ny fahafatesan'ny mararin'ny homamiadana ny fanjakàna Rosiana: tamin'ny Martsa 2015, namoaka fampitandremana ofisialy iray ny Roscomnadzor ho an'ny tranonkalam-baovao Orthodox “Pravoslavie i Mir” (Ny Orthodoxy sy ny Tontolo) momba ny tantara iray mahakasika ny fahafatesan'ireo olona roa nararin'ny homamiadana nisafidy ny hanapitra ny ainy. Nangatahan'ilay mpanivana ireo mpamoaka mba hanaisotra ilay famaritana ny fomba nanatanterahana ilay famonoantena, satria ilay votoaty dia ninoan'ilay masoivoho fa nanitsakitsaka ny lalàna natao hiarovana ny ankizy amin'ny “vaovao manohintohina”. Rehefa nesorin'ilay tranonkala ireo antsipirihany ireo, nandefasan'ny Roscomnadzor fampitandreana iray hafa indray ry zareo, nitakiana azy ireo hanaisotra ihany koa ilay lazaina fa antony niteraka ny famonoantena (izany hoe, ny hirifiry nozakain'ireo marary noho ny tsy fahampian'ny fanafody). Nolavin'ny tonian'ny famoahana ao amin'ilay tranonkala, Anna Danilova, ilay fangatahan'ny masoivoho, tao anaty sata iray tao amin'ny Facebook ary nolazainy fa ireo tantara rehetra miresaka famonoantena navoakany dia efa voadiniky ny psikology manampahaizana voamarina avokoa.
Manaraka ny fenitry ny tontolo sy ny indostria ny sasany amin'ireo taridàlan'ny Roscomnadzor hifehezana ny fitaterana ilay olana. Marobe ireo fikambanana iraisampirenena sy media mpilaza vaovao no manana fepetra mahakasika ny fitaterana tomponandraikitra amin'ny resaka famonoantena (manana taridàlana iray momba io ihany koa ny Global Voices). Ny taridàlan'ny Fikambanana Iraisampirenena misahana ny Fahasalamana mihitsy koa dia miaty ireto torolàlana manaraka ireo, ankoatry ny hafa maro :
Ny antony voalohany mitondra ho amin'ny famonoantena dia ny rarintsaina tsy voakarakara. Azo tsaboina tsara ny rarintsaina ary azo sorohana ny famonoantena. Azonao atao ny mahazo fanohanana avy amin'ny laharana miafina natao hiantsoan'ireo mihevitra ny hamono tena na ireo manana olana ara-pihetsehampo. Tsidiho ny Befrienders.org hahitanao ny laharana manolotra fanampiana ho fisorohana ny famonoantena ao amin'ny firenenao